Mampihetsika mavitrika ny sehatry ny fiara elektrika ny ASE, ary novokarina betsaka ny modely fanovana herinaratra mandeha ho azy - YIC International Co Limited |Ny mpamatsy fitaovana elektronika mihodina |www.YIC-Electronics.com
Home > News > Mampihetsika mavitrika ny sehatry ny fiara elektrika ny ASE, ary novokarina betsaka ny modely fanovana herinaratra mandeha ho azy
Mampihetsika mavitrika ny sehatry ny fiara elektrika ny ASE, ary novokarina betsaka ny modely fanovana herinaratra mandeha ho azy
Araka ny tatitra farany avy amin'ny Taiwan Media Central News Agency, ny ASE Investment and Control, orinasa mpamono fonosana sy fitiliana lehibe, dia miasa am-pahavitrihana fiara mpitondra angovo vaovao sy fiara elektrika. Araka ny loharanom-baovao, ny zanany vavy USI dia niditra an-tsokosoko ho an'ny mpanam-pahefana angovo vaovao sy ny rafitra fampangatsiahana ary nandalo ny fanamarinana ho an'ny mpanjifa any ivelany. Ny modely fanovana herinaratra ho an'ny fiara elektrika dia novokarina betsaka.
Araka ny angon-drakitra, ASE Investment Control dia fiaraha-miombon'antoka ASE sy Sipin. ASE dia orinasa mpanamboatra fonosana semiconductor sy fanandramana manerantany. Izy io dia manome mpanjifa semiconductor avy amin'ny fisedrana an-tsokosoko ary ny fitsapana ny wafer hatramin'ny fonosana farany, ny fitaovana ary ny fitsapana vokatra vita. Serivisy mitambatra.
Ary USI no zanany mitazona ary manana traikefa mihoatra ny 30 taona amin'ny indostrian'ny fiara, manome vahaolana DMS feno sy serivisy famokarana manerantany. Amin'izao fotoana izao, ny vokatra elektronika mandeha ho azy dia tena ahitana mpampita herinaratra, mpanitsy, mpanamory moto, jiro LED ivelany, IEPB (frein fiantsonana elektrika mifangaro), vondrona fanaraha-maso na tontonana fanaraha-maso ho an'ny fampahalalana momba ny fiara sy fampahalalana momba ny fialamboly.
Tamin'ny volana novambra 2020, nitatitra ny fampahalalam-baovao avy any ivelany fa niditra tamin'ny sehatry ny famatsiana ny sarin-tsarimihetsika CMOS automotive an'ny Sony ny ASE, ary mpanamboatra faharoa niditra tamin'ny rojom-panomezana farany an'ny sensor an'ny sary CMOS automotive an'ny Sony.
Ny fidirana amin'ny rojom-pifandraisana any aoriana an'ny sensor an'ny sary CMOS an'i Sony dia midika fa ny ASE dia hahazo fonosana sensor sy sary fanandramana sary maro an'isa an'ny Sony. Ny haino aman-jery vahiny dia nanonona tao amin'ilay tatitra fa hanangana orinasam-pandraharahana vaovao ny ASE hikarakara ny baiko momba ny sary CMOS avy amin'i Sony.
Hatramin'ny telovolana fahatelo amin'ny taona 2020, noho ny fahaizan'ny famokarana mofo manify, maro ny zavamaniry fonosana sy fanandramana, ao anatin'izany ny ASE Investment Holdings, KYEC, sns., No nanamafy ny fahafaha-mamokatra noho ny fitomboan'ny fangatahana fonosana sy fitiliana nateraky ny wafer output, ary koa nitondra ny asany. Nitombo haingana ny vola miditra.
Tamin'ny taona 2020, ny fidiram-bola natolotry ny ASE dia 476,979 miliara yuan (NTD, io ambany io ihany), fitomboana 15,44% raha oharina tamin'ny taona 2019, avo lenta hatramin'ny nananganana ny orinasa, ny tombom-barotra azo tamin'ny vola dia nahatratra 34,878 miliara yuan, ary ny tombony azo azo ny tompon'andraikitra amin'ny orinasa ray aman-dreny dia 27,594 miliara yuan. , Fisondrotana isan-taona amin'ny taona 63,7%, tombom-barotra isaky ny anjara aorian'ny hetra dia 6.47 yuan, tsara kokoa noho ny nandrasan'ny mpandalina 5,8 yuan, ary koa avo lenta.
Nozarain'ny raharaham-barotra, ny fonosana semiconductor tamin'ny taon-dasa sy ny vola azo tamin'ny fanandramana dia 280.297 miliara yuan, ary ny vola miditra amin'ny serivisy fanodinana elektronika dia 204,723 miliara yuan, samy nahatratra haavo vaovao.